Ọmụmụ ọkachamara na-agwa gị ma enwere ike iji ọgwụ N95 mee ihe mgbe ọ gbasasịrị? Kedu usoro nke mgbochi kacha mma? - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Ọmụmụ ọkachamara na-agwa gị ma enwere ike iji ọgwụ N95 mee ihe mgbe ọ gbasasịrị? Kedu usoro nke mgbochi kacha mma?
Mgbasa ikuku ikuku bụ otu n'ime ụzọ mgbasa site na coronavirus akwụkwọ akụkọ. Mgbe onye ọrịa gbụrụ, sneezes, ma ọ bụ kwuo okwu ma ọ bụ iku ume, ha na-agbasa ikuku aronsols nke nje na-efe efe. Ọtụtụ obere ikuku na-anọrọ ikuku ogologo oge, na-etinye ndị mmadụ n'ihe ize ndụ nke ibute ọrịa. Ya mere, ikpuchi nkpuchi abụrụla otu n'ime ụzọ dị mma isi gbochie ma na-ejide mgbasa nke ọnụnọ coronavirus.
Nrụpụta nrụpụta nke N95 respirator na 0.3 sodium chloride aerosol ụkwụ nke ukwu karịa 95%, nke nwere ike igbochi mgbasa nke nje. Ihe nchedo nlekọta ahụike N95 ejirila obere oge zuru ụwa ọnụ kemgbe ntiwapụ ahụ. N'okwu a, iwere ihe masks mgbe ezesịrị nwoke nwere ezigbo uru ọ bara. Mahadum Stanford na 4C Air tụlere usoro dị iche iche iji zoo maka enweghị agbaze, isi ihe ndezi maka ihe N95 masks.
N95 mask gbajiri agbaji blown nonwoven akwa Ọdịdị na filtration esereese
Ndị ọrụ nyocha ahụ họọrọ oke okpomọkụ (75 ℃, 30 min), vepo mmiri (banyere 15 cm dị elu na mmiri esi, 10 min), 75% ethanol na etinyere, na ọgwụ ịgba ahịhịa (nwere 2% sodium hypochlorite) (0.3 ~ 0.5 mL) na ụdị ise nke ọgwụ eji alụ ọgụ na-ejikarị dịka ultraviolet irradiation nke nonwovens diswo disposable processing, wee nwalee mgbanwe ọrụ ya. Nsonaazụ gosipụtara na ngbanye arụmọrụ nke nonwovens agbazela nke ukwuu mgbe emesịrị ethanol na mmụba ụlọ., ebe ụzọ ọgwụ ndị ọzọ na-egbochi ihe ọ bụla enweghị ihe ọ bụla na filtration arụ ọrụ nke nonwovens gbazee.
Mmetụta nke kpo oku, uzuoku na ultraviolet ọkụ na filtration Njirimara nke agbaze agbaze nonwovens
Ndị ọrụ ahụ nyochakwara nsonaazụ nke ọtụtụ usoro igba ogwu na Njirimara nke agbaze agbaze, nke ha jiri agba igwe jiri okpomoku mee ihe, vepo mmiri, na radieshon radieshon. Nsonaazụ gosipụtara na nrụpụta arụmọrụ nke nonwovens gbajiri agbaji belata nke ọma 5 ugboro nke usoro ubara mmiri, ebe arụmọrụ nke nonwovens na-agbaze na-agbanweghikwa kemgbe 10 oge okpomoku di elu na oriọna ultraviolet.
Mmetụta nke ọkụ ultraviolet na Njirimara nke nonwovens gbazee
A gara n’ihu ịmụba udu mmiri na ọnọdụ okpomọkụ na akụrụngwa na-abụghị ihe na-agbaze. Nsonaazụ gosiri nke ahụ na 85°C, mgbe 20 oge ọgwụgwọ na iru mmiri dị iche iche, arụmọrụ nke nonwovens gbazere belata nke ukwuu, na ihe owuwu ya agbanweghi nke ọma. Ọbụna mgbe emechara 50 oge ọgwụgwọ na 85°C na 30% iru mmiri, arụmọrụ nke agba agba agba na-abụghị nke eji obere ihe belata. N'otu oge ahụ, otu ọgwụgwọ ahụ ka etinyere na N95 mask, na arụmọrụ ya adịchaghị mbelata nke ukwuu. Otú ọ dị, Enwere oke nke 125 ℃ maka ọnọdụ okpomọkụ nke ọgwụgwọ kpo oku, nke nwere ike ịbụ n'ihi na ọnọdụ okpomọkụ dị nso na agbaze nke ihe ahụ n’oge a, na ngbanwe nke microilite ya ga - eduga na mbelata nke ihe ndi mmadu na - eme.
Ngbanwe nke nzacha a ghachara agbacha ma kpochapu akwa nhichapu ihe nkpuchi ma kpuchie ya na okpomoku di nkpa
Site na nkwubi okwu ndị a dị n'elu, A na-atụ aro ka ọ ghara ị theụ mmanya, ọgwụ nje, ncha na mmiri iji hichaa ma hichaa nkpuchi ndị N95 na-emegharị. Disinzọ mgbochi ultraviolet na ikuku dị elu bụ ọgwụ mgbochi nke nhọrọ. Otú ọ dị, n'ihi ụta dị ala nke radieshon ultraviolet na obere ikike nje, high-temperature treatment below 100°C nwere obere mmetụta na-abụghị ihe gbazere ma enwere ike reused ọzọ ọtụt�ọgwụgwọ okpomọkụ dị elu n'okpuru 100atment below 100°C bụ usoro mgbochi kacha mma maka nkpuchi N95.
Njikọ mbụ: https://doi.org/10.1021/acsnano.0c03597
(isi mmalite: ACS, Otu oha nke America,)
Mahadum sayensị na teknụzụ nke China (ustc) amụbawo ụdị ihe ọkụkụ na-agbanwe ọkụ ọkụ, ike di elu na ike nano cellulose
Kedụ ihe ndi bara uru nke uwe ndị amamihe dị na ngalaba agha?